Emile Heskey oo u tilmaamay Jack Grealish kooxda uu si wanaagsan ugu soo bixi doono haddii uu ku biiro – Gool FM
(London) 27 Mar 2020. Halyeyga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Emile Heskey ayaa aaminsan in xiddiga khadka dhexe naadiga Aston Villa ee Jack Grealish ay u fiicnaan laheyd inuu ku biiro Manchester United.
Jack Grealish ayaa lala xiriirinaayey inuu ku biirayo safka Red Devils xagaaga soo aadan, kaddib markii uu ku soo bandhigay qaab ciyaareed heer sarre ah kooxda Aston Villa.
Emile Heskey ayaa wareysi uu bixiyay waxaa soo xigtay “Mirror” ee dalka England waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan u maleynayaa in Jack Grealish uu sifiican ugu ciyaari doono Manchester United, waa nooca qadka dhexe ee kooxda ka maqnaa dhawaantan”.
“Man United waxay haatan heysataa laacib noocan oo kale ah waana Bruno Fernandes, laakiin lahaanshaha ciyaaryahan kale oo ka garab ciyaara wuxuu hoggaamin karaa qadka dhexe, kaasina waa Jack Grealish”.
“Jack Grealish wuxuu si fiican kaga ciyaari karaa dhowr boos oo kala duwan, wuxuuna si wanaagsan ugu soo bixi doonaa kooxda Manchester United”.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska uu Jack Grealish ku joogo kooxda Aston Villa uu ku egyahay xagaaga 2023, wuxuu dhaliyay 7 gool, wuxuuna caawiyay 6 gool kale, tan iyo bilawga xilli ciyaareedkan.
Bruno Fernandes oo qiray inuu ka qoomameynayo murunkii ku dhex maray isaga iyo Guardiola kulankii Manchester derby